Siyaasiga C/llahi Sh. Xasan: Maalmahaan ayaa ley hanjabayey (Dhegeyso) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Siyaasiga C/llahi Sh. Xasan: Maalmahaan ayaa ley hanjabayey (Dhegeyso)
A warsame 15 August 2014 15 August 2014
Mareeg.com: Siyaasiga C/llaahi Sheekh Xasan oo saaka ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM xoog ku galeen ayaa hadlay intii rasaastu ku socotay, wuxuuna sheegay in maalmahaan loo soo hanjabayey.
C/llaahi Sheekh Xasan oo degan degmada Wadajir ayaa inkastoo gurigiisa lala wareegay ku adkeystay inuusan joojin doonin kia hadalka fekerkiisa, isagoo xusay in loo soo weerarary si loo aamusiyo.
Halkaan ka dhegeyso C/llaahi Sheekh Xasan oo la hadlay KNN
Nabadsugida iyo AMISOM oo dagaal xoog leh kadib la wareegay guryaha Axmed Daaci & C/llahi Sh. Xasan
Dhegeyso Axmed Daaci oo hadlay markii saaka dagaalku ku socday